Lozam-piarakodia : Nandratra olona 5 -
AccueilSongandinaLozam-piarakodia : Nandratra olona 5
Lozam-piarakodia : Nandratra olona 5
Nitondra faisana ny mpandeha. Potika ny fiara, naratra voafaoka ny mpitondra môtô. Olona dimy avy hatrany no fantatra fa naratra mafy vokatry ny firimorimon’ny fiara “ peugeot 405” iray nifatratra tamin’ny mpandeha teny Andrainarivo hihazo any amin’iny lalan’Antanimora iny, noho ny fahatapahan’ny hisatra. Ny harivan’ny zoma lasa teo no nitranga ny loza, tokony ho tamin’ny 6 ora sy fahatelony teo. Rangahy iray manodidina ny 34 taona no mpamily ity fiara “Peugot 405” ity. Olona dimy avy hatrany no fantatra fa naratra mafy vokatr’ity loza ity, renim-pianakaviana iray niaraka tamin’ny zanany vao dimy taona monja, lehilahy iray, ka nentina olon-tsotra teny amin’ny hopitaly. Ahiana tanteraka ny ain’ilay vehivavy iray raha toa ka efa nahazo fitsaboana kosa ny ambiny. Nisy mantsy no voa mafy teo amin’ny lohany, ny tongony raha ny tati-baovao. Ankoatra izay, nahitana fahasimbana avokoa, na ity fiara nitera-doza mpitatitra, na ireo voakasika tamin’izany.
Araka ny fanazavan’ny mpitandro filaminana nisahana ny raharaha sy ireo nanatri-maso ity loza ity, dia nandeha mafy ilay fiara tsy mataho-dalana io, izay mety efa tapaka hisatra avy any amin’ny lalana nalehany. Somary nalalaka ny arabe, ka izay no nitarika ny fahavoazana. Toa ny tsy nahatana familiana ilay mpamily, ka dia nivilivily kanjo nifatratra tany amin’ireto entan’olona miaraka amin’ny mpandeha an-tongotra. Nipitika avy etsy ankavanana ity môtô iray ity, ka nahatsindry zazavavikely indray, ary nivadika avy hatrany ilay fiara kely voadona. Tsy nitsahatra ny tabataba sy ny fanomezan-tsiny ny mpamily izay nahatonga ny loza. Tonga teny an-toerana ny zandary avy etsy Betongolo nanao ny famotorana sy ny fizahana. Nentina teny amin’ny biraon’ny zandary nanaovana fanadihadiana ilay rangahy, ary hatolotra ny fampanoavana aorian’izay. Araka ny fanamarihana nataon’ny olona dia efa miverina ny fahadisoana sy fandikan-dalàna ataon’ny Taksibe sy ny fiara eny amin’iny manodidina iny. Tato ho ato dia saika efa fanaon’ireo taksibe ny toa izao, ary mitsoaka aorian’ny loza.